I-Apple ibhalisa i-Apple TV kwi-patent office ngokungathi iyikhonsoli | Ndisuka mac
I-Apple ibhalisa i-Apple TV kwi-patent office ngokungathi iyikhonsoli
Ngokwesiqhelo xa sithetha ngamalungelo awodwa omenzi wechiza e-Apple silindele ukuba iimveliso ezintsha okanye iimveliso ezinokuthi zifike kwixesha elizayo, kuyenzeka kananjalo nala malungelo abenzi okanye ukubhaliswa okusebenza kuphela ukucela imali xa umntu efuna ukuyisebenzisa. Ngeli xesha into esinayo ubhaliso lwemveliso esele siyazi Kwaye into oyifunayo kukongezwa kuluhlu lweemveliso ezibhaliswe njengekhonsoli.
I-Apple TV okwangoku inemidlalo, Kodwa isicelo sobhaliso lwamanye amazwe u-028 sesona sisetyenziselwa ukuthuthuzela kwaye yile kanye inkampani yeCupertino ifuna iApple TV. Le yintshukumo engaqhelekanga ethathela ingqalelo uhlobo lwemveliso, kodwa asizukuba yiyo ukugxeka le rekhodi yeApple.
Ngokukhawuleza Apple Kuhlala kuhleli umntu ophetheyo ukubonisa le patent kwaye inkampani ijonge ukuyibhalisa yibhokisi ephezulu ebekiweyo ngokungathi iyikhonsoli. Utshintsho kwixa elizayo kwesi sixhobo? Ewe, inyani kukuba intengiso yekhonsoli ngoku igcwele kakhulu, kekwaye akubonakali ngathi iApple ngoku ifuna "ukubeka impumlo" ekwenziweni kwekhonsoli yayo okanye into enjalo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, isizukulwane sesine nesihlanu i-Apple TV inezicelo zomdlalo kwaye ivumela abasebenzisi abanayo ukuba bayonwabele, kodwa ayisisixhobo esenzelwe ngokukodwa umdlalo nangona ine-SteelSeries engenazingcingo njengesixhobo. Nimbus kunye amandla kunye nokukwazi ukusasaza umxholo we-4k ukusindisa, enokuvumela ukongeza ezinye izihloko zomdlalo ezinomdla. Oku kunokuba yinto enokuthi iApple ibenayo kule rekhodi, ukumilisela uthotho lwemidlalo yevidiyo elungileyo engafani naleyo inazo ngoku ezizicwangcise ngokuthe ngqo izicelo zebhokisi ephezulu ebekiweyo. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni ekugqibeleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » I-Apple ibhalisa i-Apple TV kwi-patent office ngokungathi iyikhonsoli
I-Apple AirPods iya kufumana isatifikethi sokumelana namanzi kunye nomsebenzi "Hey Siri"
Ukufana kweBhokisi yezixhobo 2.5 ngoku iyafumaneka ngeempawu ezintsha